ISO ကို 14001: 2015 စံနှုန်းသစ်ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိ - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2011-05-14 hits:
ISO ကို 14001, ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များများအတွက်ကမ္ဘာကြီး \_ 's ပထမဦးဆုံးကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း, ထက်ပိုပြီးကူညီပေးခဲ့တယ် 300,000 ကမ္ဘာတဝှမ်းအဖွဲ့အစည်းများသူတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်. လက်ရှိအချိန်မှာ, စံ၎င်း၏အရာရှိတဦးကဖြန့်ချိပြီးကတည်းကပထမဦးဆုံးအဓိကတည်းဖြတ်မူခံထားပါတယ် 1996. အသစ်စံတရားဝင်မနေ့ကပြန်လွတ်လာခဲ့သည် (စက်တင်ဘာလ 15).
အသစ်စံချိန်စံညွှန်းသူတို့အဖွဲ့အစည်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ဆက်လက်သေချာ, ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်, နှင့်အနာဂတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်း. ထက် ပို. အနေဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကျွမ်းကျင်သူများက 70 နိုင်ငံတည်းဖြတ်မူပါဝင်ခဲ့, နှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများအဖွဲ့အစည်းများပြောင်းလဲနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကူညီရန်ဒီဇိုင်း updates များကိုတစ်ဦးစီးရီးထည့်သွင်း – ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကနေထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုမှ.
ISO 14001 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှ�ISO ကို��ိုလျှော့ချရန်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့အမူဘောင်ကိုထောက်ပံ့ပေး, စွန့်ပစ်, နှင့်စွမ်းအင်စီးပွားရေးကြီးထွားလာနေချိန်တွင်. ISO 14001 ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီများသည်ပိုပြီးဆန်းသစ်ဖြစ်လာကူညီပေးနိုင်ပါသည်, စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အဖြစ်စဉ်များတိုးတက်စေရန်, စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း, နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏မကျြမှောကျ၌ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုတိုးမွှငျ့, ဖောက်သည်များနှင့်အများပြည်သူ. နောက်ဆုံးတွင်, ဒီစံနှုန်းသစ်ကုမ္ပဏီများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်တွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းနေနှင့်သူတို့ကရှေ့တန်းမှာအမြဲရှိပါတယ်သေချာကူညီပေးပါမည်.
က ISO ၏အပြောင်းအလဲများကို 14001:2015 ပါဝင်:
1. အသစ်အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းပုံ (HLS ဖွ) ဘုံစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုချမှတ်, အဓိပ္ပာယ်, ခေါင်းစဉ်, မျိုးစုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါအပေါင်းတို့နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များများအတွက်ကျမ်းလွယ်ကူသောပေါင်းစည်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်.
2. အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်, ဒါကြောင့်နောက်ထပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များသို့ပေါင်းစည်းကြောင်းသေချာစေရန်အသစ်တခုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်.
3. အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အန္တရာယ်များအပေါ် refocus (ဥပမာ, ကုန်ကြမ်းအတွက်စျေးနှုန်းအတက်အကျ) ဤအအန္တရာယ်များကကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို (ပိုမိုမြင့်မားသောသယံဇာတထိရောက်မှု)
4. သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ကူညီပေးဖို့စည်းရုံးရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်. နယူးစဉ်းစားတွေးခေါ်, အဖြစ်ကောင်းစွာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများ၏သက်ရောက်မှုအဖြစ် (ထိုကဲ့သို့သောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအဖြစ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူ့ဟာသူပေါ်.
ISO ကို 14001:2015 စံပြောင်းလဲမှုအချိန်ဇယား
1. ဇူလိုင်လ 2014
ISO ကို 14001:2015 dis လွှတ်ပေးရန်
2. ဒီဇင်ဘာလ 2014
ISO ကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ကိုတရားဝင်အဲဒီ ISO သွားမဲပေး 14001:2015 dis ဗားရှင်း, သစ်ကိုစံ FDIS ဇာတ်စင်ထဲသို့ဝင်
3. ဧပြီလ 2015
အဲဒီ ISO 14001:2015 ကို update key ကိုအစည်းအဝေးဗြိတိန်နှင့် ISO ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာကော်မတီက ISO / TC 207 / WG ကိုကျင်းပခဲ့သည် 5, အရာက ISO ၏တည်းဖြတ်မူအတွက်တာဝန်ရှိသည် 14001, သူတို့က ISO များလွှတ်ပေးရန်ဆီသို့သိသိသာသာခြေလှမ်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထား 14001:2015 ဒီအစည်းအဝေးမှာ.
4. မေ 2015
ISO ကို 14001:2015 FDIS ဗားရှင်းမဲပေး
5. စက်တင်ဘာလ 2015
ISO ကို 14001:2015 တရားဝင်စက်တင်ဘာလအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 15.
ပြီးခဲ့တဲ့လက pad ပါလိုအပ်ချက်များအတွက်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ